Mbappé oo tilmaamay waxa ugu muhiimsan ee uu Messi ku soo kordhiyay Paris Saint-Germain – Gool FM
Dajiye December 8, 2021
(Paris) 08 Dis 2021. Gooldhaliyaha ugu sarreeya Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé, ayaa sharraxay inuu ku kalsoon yahay in Lionel Messi uu go’aamin doono taariikhaha muhiimka ah iyo kuwa waaweyn, kaddib markii kooxda PSG 4-1 kag adkaatay xaalay naadiga Club Brugge tartanka Champions League.
kooxda Paris Saint-Germain ayaa 4-1 kaga adkaatay kooxda Club Brugge, waxaana goolasha u kala dhaliyay Kylian Mbappé iyo Lionel Messi oo min 2 gool ah.
Kaddib marka uu dhammaaday kulanka ayuu gooldhaliyaha ugu sarreeya Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé xaqiijiyay in saaxiibkiis Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, islamarkaana baahida loo qabo ay noqon doonto mid deg deg ah oo weyn inta lagu jiro waqtiyada muhiimka ah.
Kylian Mbappé ayaa wareysiga uu ku bixiyay warbaainta wuxu ku ammaanay saaxiibkiis Lionel Messi:
“Way fududahay in laga garab ciyaaro Lionel Messi, xaqiiqdii wax badan ayuu naga caawin doonaa marka la gaaro waqtiyada dhammaadka iyo go’aaminta xilli ciyaareedkan.”
“Leo wuu faraxsan yahay kaddib markii uu dhaliyay labo gool cusub oo Champions League ah, waxay galin doontaa kalsooni weyn kulankan, waxa uuna wax badan naga caawin doonaa marxaladaha soo socda.”